सेना मा महिला को लागि सेवा अनुबंध: यो सम्भव छ?
सशस्त्र सेना मा सेवा को एक किसिम दुवै सार्वजनिक र निजी चासो जोडती एक सेवा सम्झौता छ। पहिलो मामला मा - राष्ट्रिय रक्षा को बलियो बनाउँछ एउटा स्वैच्छिक योगदान, सशस्त्र सेना को लडाई तत्परता वृद्धि। दोस्रो मामला मा - भविष्यमा स्थिरता गर्न राम्रो-गर्दा अनि गति वृद्धि छ। सैनिक सेवा सम्झौता लागि - एक आसान काम छ। राज्य आफ्नो कर्तव्य बाहेक, करार निष्कर्षमा छ जो एक serviceman, अझै पनि रूपमा fatherland को व्यावसायिक रक्षक छ, दायित्व र मान्छे छ।
सम्झौता सेवा गर्ने बालिका लागि
को fairer सेक्स को प्रतिनिधिहरु को अनुरोध मा पनि सशस्त्र सेना मा सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। केटाहरू एक बराबरीको मा वयस्क महिला पुगन मा एक सम्झौता सैनिकहरू हुन सक्छ। रूसी महिला स्थितिहरू Privates, sergeants र पैटी अधिकारीहरु मा सेवा गरिरहेका छन्। लगभग सबै सेना, सैनिक जिल्लामा र भागहरु मा सम्भव करार को हस्ताक्षर। यस बालिका लागि सम्झौता सेवा, सिद्धान्त मा, राम्रो परिणाम दिन्छ, यो सबै भन्दा राम्रो परिणामहरू प्रशिक्षक स्थितिहरू कब्जा सिपाहीहरूले बीच अवलोकन छन् उल्लेख गरे। सिपाहीहरूले "जेन" को सबैभन्दा कर्मचारी स्थितिहरू अब छ र चिकित्सा पेशेवरहरुलाई र आर्थिक सेवाहरू संलग्न छन्।
महिला लागि सम्झौता सेवा अनिवार्य अवस्था केही गर्न तिनीहरूलाई आवश्यक छ। करार को निष्कर्षमा को समयमा सैनिक "जेन" को पहिलो उमेर 18 र 40 वर्ष बीच हुनुपर्छ। उम्मेदवार सैनिक सेवा, अर्थात् को चिकित्सा र मनोवैज्ञानिक स्तर अनुरूप चल्नै पर्छ यो स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त हुनुपर्छ। बाहिर चिकित्सा परीक्षा को आवश्यकताहरु र व्यावसायिक मनोवैज्ञानिक चयन अनुपालनको निर्धारण गर्न। परिणाम अनुसार सैन्य सेवाको लागि उपयुक्ततामाथि एक राय जारी। साथै, केटी व्यावसायिक र शारीरिक प्रशिक्षण हुनुपर्छ। सबै आवश्यकताहरु सम्झौता अनुपालनको हस्ताक्षर र सेवा सम्झौता सक्रिय छ भने। जब रूसी संघ को सैन्य commissariat मा स्पष्ट हुनुपर्छ।
केटी, सेना गर्न सम्झौता प्रविष्ट गर्न चाहने, को लागि एक आवेदन पेश गर्नेछ सैन्य commissariat निवास स्थान वा निकटतम सैन्य एकाइ। नाम, जन्म मिति, निवास (दर्ता) को स्थान र अनुमानित सेवा जीवन: एक वक्तव्य व्यक्तिगत डाटा प्रदान गर्न। कानून अन्तर्गत यो एक सम्झौता तीन, पाँच वा दस वर्ष अवधिका लागि, साथै सैन्य शैक्षिक संस्था मा प्रशिक्षण र पाँच सेवाको यसको पूरा गरेपछि वर्ष को समय मा निष्कर्षमा पुग्न गर्न सम्भव छ। बयान बाहेक को प्रस्तुति आवश्यक पहिचान साबित कागजातहरू र नागरिकता, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति र काम रेकर्ड पुष्टि कागजातहरू को प्रतिहरू। यो एक मनपरी ढंगमा बनेको एक बायो डाटा छ जो प्रश्नावली, भर्नु आवश्यक छ, र हात द्वारा लेखिएको छ। आवेदन सुरक्षित छ, र त्यो क्षण देखि नागरिक सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जान्छ। आवेदन पेश हुनुपर्छ अघि सबै ध्यान विचार र वजन। मात्र होइन वर्दी, Insignia र सम्मान, तर पनि सङ्कल्प, धीरज र overwork छ - प्रिय, बालिका लागि अनुबंधित सेवा भनेर सम्झना।
काम पसल सहायक: यो थाह लायक बारेमा के?
कीरोवको नियोक्ताहरूको कालो सूची। नियोक्ताहरूको बारे समीक्षाहरू
पेशा मनोवैज्ञानिक: को फाइदा र बेफाइदा, साथै को विशेष
एक बिक्री प्रतिनिधि कसरी बन्न
भर्ती। यो यस्तो जनावर हो?
मोहक काम "fasovschitsa"। यो यति सजिलो छैन ...
Bezsulfatny स्याम्पु के हो
Phalaenopsis - प्रत्यारोपण र ख्याल यसलाई पछि
फारसी साम्राज्य: मूल, जीवन र संस्कृति को इतिहास
एक सुगा को सेक्स कसरी निर्धारण गर्ने? व्यावहारिक सल्लाह
Mariupol मा SBU कर्णेल गरेको हत्या र युक्रेनमा अन्य घटनाहरू
नवजातका लागि कोलोको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार
Gatling मेशिन गन। घटना को इतिहास
Sprats संग सलाद: व्यञ्जनहरु। sprats नयाँ र सिद्ध व्यञ्जनहरु सलाद
इल्या Proskuryakov - Magnitogorsk एक स्नातक स्कूल
एक ब्लकहेड के हो? यसलाई उसले छ?
म आफ्नो हातले एक सैंडविच प्यानल बनाउन सक्छ?
कसरी पेच बिना रक्सी को एक बोतल खोल्न: सिद्ध तरिका